Wararka - Wiish culus oo ka mid ah mashiinka kor loo qaado
Sare u qaadida Platform Duty Platform, isbarbar dhig wiishashka mobilada, waxay u oggolaan kartaa dhaqso dhaqaaqa & dansan. Shaqooyinka badankood ee ku socda gaadiidka ganacsiga waa tijaabo & dayactir fudud, oo dhakhso loo dhammeeyo. Iyadoo la raacayo wiishka 'Platform', hawlwadeenku wuxuu ula macaamili karaa shaqooyinkan si ku habboon, taas oo badbaadin karta waqtiyadaada badan. Qaadista Madalku waxay khuseysaa isu imaatinka, dayactirka, dayactirka, beddelka saliida iyo dhaqida gawaarida ganacsiga ee kala duwan (baska magaalada, gaariga rakaabka iyo midka dhexe ama culus).
Maaddaama ay tahay shirkadda kaliya ee ganacsiga ee haydarooliga ganacsiga qaadda soo saaraha Shiinaha, iyo soo saaraha soo saaraha baabuurta ganacsiga ee adduunka oo dhan, MAXIMA naqshadeynta oo samee kaararka 1 ee 2016.
MAXIMA Platform wiishashku waxay qaadataa nidaamka wiishka toosan ee korontada ku shaqeeya iyo aaladda xakamaynta dheelitirka sare si loo hubiyo iswaafajin kaamil ah oo dhululubbada ah iyo kor u qaadista siman.
Sannado horumar ah kadib, injineeradeenna xirfadleyda ah waxay sii wadaan cusbooneysiinta naqshadeynta wiishashka iyo qalabka la xiriira. Waa ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in, MAXIMA ay sameyn karto labada wiish ee dhulka hoostiisa ah iyo kan hadda socda. Dhererka wiishka mashiinka wuxuu noqon karaa 7 mitir, 8 mitir, 9 mitir, 10 mitir, iyo 11.5 mitir. Sidoo kale MAXIMA waxay ku rakibtay mashiinada wiishka culus culus ee doomaha, kaas oo qaadista awooda ay noqon karto 12.5Tons halkii set.
In 2018, wiishka MAXIMA platform waxaa lagu sharfay in laga aqoonsado shirkadda shahaadada Israel. Tan iyo markaas, tobanaan nooc oo wiishka MAXIMA ah ayaa la siiyay ciidanka Israel. Isla sanadkaasna, wiishka MAXIMA ayaa lagu sharfay inuu helo shahaadada CE.
Ka fikir wiish gawaarida ganacsiga, ka fikir MAXIMA. Iyada oo leh alaab tayo leh, iyo adeeg dambe oo xirfad leh oo ka socda MAXIMA & qaybiyaha maxalliga ah, MAXIMA ayaa kuu fududeyn doonta shaqooyinkaaga. Mar kasta oo aad u baahato taageero, MAXIMA ayaa had iyo jeer ku jirta gacantaada. Kuu ogolaanaya inaan ku siino talo xirfadeed iyo xalal ku habboon su'aal kasta, hadda wac 0086 535 6105064.